Ifu Lokumaketha: Ungayenza Kanjani I-Automation ku-Automation Studio ukuze Ungenise Oxhumana Nabo Nge-SMS ku-MobileConnect | Martech Zone
Ifemu yethu isanda kusebenzisa i-Salesforce Marketing Cloud kuklayenti elinokuhlanganiswa okucishe kube kweshumi nambili okube nemithetho yezinguquko eyinkimbinkimbi nezokuxhumana. Emsukeni kwakukhona a I-Shopify Plus base nge Shaja kabusha Okubhaliselwe, isixazululo esidumile nesiguquguqukayo sokunikezwa kwe-e-commerce okusekelwe kokubhaliselwe.
Inkampani inokuqaliswa kokuthumela imiyalezo yeselula lapho amakhasimende engalungisa khona ukubhalisa kwawo ngomlayezo wombhalo (SMS) futhi babedinga ukuthutha abathintwayo babo beselula baye ku-MobileConnect. Imibhalo yokungenisa oxhumana nabo beselula ku-MobileConnect ithi:
Dala incazelo yokungenisa ku Xhumana noMakhi.
Dala okuzenzakalelayo ku I-Automation Studio.
Faka i- ngenisa umsebenzi ku-automation.
Uma umisa umsebenzi wokungenisa, khetha i ngenisa incazelo udalile.
Isheduli kanye vula okuzenzakalelayo.
Lokho kuzwakala njengenqubo yezinyathelo ezi-5, akunjalo? Iqiniso liwukuthi iyinkimbinkimbi kakhulu ngakho sinqume ukuyibhala futhi sabelane ngayo lapha.
Izinyathelo Eziningiliziwe Zokungenisa Okuzenzakalelayo Koxhumana Nabo Beselula Ye-Mafu Ku-MobileXhuma Usebenzisa Isitudiyo Se-Automation
Isinyathelo sokuqala ukudala incazelo yakho yokungenisa ku-Contact Builder. Nakhu ukuhlukaniswa kwezinyathelo zokwenza lokhu.
Dala incazelo yokungenisa ku Xhumana noMakhi ngokuchofoza Dala inkinobho kokuthi Xhumana Nomakhi > Ukungenisa.
Khetha Uhlu njengakho Indawo okuyiwa kuyo uhlobo lokuthuthukisa ofisa ukulwenza.
Khetha Ngenisa Umthombo. Sikhethe ukungenisa kusuka okwesikhashana Isandiso Sedatha elayishwe ngaphambilini ngedatha.
Clock ivuliwe Khetha Uhlu futhi Khetha Uhlu Lwakho (Esikithi, Bonke Oxhumana Nabo - Iselula).
Laba oxhumana nabo bonke bakhethe ukungena futhi sibathuthela ku-MobileConnect, ngakho-ke kufanele Uvume Inqubomgomo Yokuthola Isitifiketi.
Imephu Amakholomu Ohlu Lwakho Lokungena (sakhe i Isandiso Sedatha ngobudlelwano be-ContactKey osebuvele bumisiwe).
Yisho umsebenzi wakho bese ukhetha owakho Ikhodi ye-SMS futhi Igama elingukhiye le-SMS.
Qinisekisa iwizadi bese uchofoza Qeda ukuze ulondoloze umsebenzi wakho omusha. Qiniseka ukuthi ungeza ikheli lakho le-imeyili ukuze uthole izaziso ukuze waziswe ngaso sonke isikhathi lapho ukungenisa kufakwa nemiphumela.
Incazelo yakho yokungenisa manje isilondoloziwe futhi ungayibhekisela kokuthi Okuzenzakalelayo kwakho ozokwakha kukho I-Automation Studio.
Izinyathelo zokudala i-automation in I-Automation Studio azicaci kahle. UNGASEBENZISI i- Umsebenzi Wokungenisa Ifayela. Thola i- Umsebenzi we-SMS lapho ungangeza khona umsebenzi usebenzisa i- Ngenisa Umsebenzi Wothintana Naye Nge-SMS.
Faka i- ngenisa umsebenzi ku-automation ngokukhetha incazelo yokungenisa oyidalile esinyathelweni sesi-8 ngenhla. Uzodinga ukunweba i- Ifolda ye-SMS lapho uzobona khona ngenisa incazelo.
Isheduli kanye vula okuzenzakalelayo. Lapho okuzenzakalelayo kwakho kusebenza, abathintwayo bakho beselula bazongeniswa futhi uzokwaziswa ekhelini le-imeyili esinyathelweni sesi-8.
Uma udinga usizo, ungangabazi ukusithinta ku Highbridge. Senze ukuqaliswa okubanzi nokusuka kwezinye izinkundla zokumaketha zamaselula kuya ku-Mobile Cloud.
Tags: i-automation studiothintana nomakhiukhiye wokuxhumanadala incazelo yokungenisaisandiso sedathaimephu yenkundlangenisa incazelongenisa uhlungenisa uhlu lweselulangenisa ababhalisile beselulangenisa umsebenzi wokuxhumana we-smsifu lokumakethaabathintwayo beselulaisitudiyo seselulai-mobileconnectinqubomgomo yesitifiketi sokungenaushonagcwalisa kabusha okubhaliselwesalesforcesfmcI-Shopify PlusSMSikhodi ye-smsigama elingukhiye le-smsindawo okuyiwa kuyo